Atsaharo ny famonoana antony Marketing | Martech Zone
Ajanony ny famonoana olona noho ny marketing
Alahady 7 aprily 2013 Zoma, Septambra 5, 2014 Douglas Karr
Rehefa mila vola ho an'ny sakafo atoandro an-tsekoly ny mpianatra dia tsy misy vokany na tsy misy vokany eo amin'izy ireo hoe avy aiza ilay vola. Noana fotsiny izy ireo ary mila vola. Tsy ny sakafo atoandro an-tsekoly ihany, fa ny vola fanampiana ho an'ny mpianatra sy ny vatsim-pianarana, ny entam-pahasalamana, ny fampianarana, ny fikolokoloana ary ny maro hafa. Ny lisitry ny filàna dia tsy manam-petra ary, amin'ny toekarena midina, dia mitombo hatrany.
Fanomezana ho an'ny mpanaraka
Rehefa nitranga ny horohorontany tany Haiti dia nanako ny momba ny filàna ara-bola sy ara-batana ilain'ny firenena ny Internet. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nanana orinasa aho. Raim-pianakaviana tokan-tena aho ary tsy be dia be ny vola. Fa nahagaga ahy ny zava-nitranga Nanolo-tena hanome vola aho raha Nahita mpanaraka maromaro tao amin'ny Twitter aho.
Tonga dia nisy ny valin-kafatra. Nikiakiaka tamiko ny olona fa tsy nanam-po aho ary zavatra mahatsiravina ho ahy izany. Gaga tanteraka aho… Te-hampitombo ny fahefako amin'ny Twitter fotsiny aho ary toa antony mendrika izany. Azoko natao ny naka ny vola ary nividy doka tamin'ny tranonkala maro mba hampiroboroboana ny kaontiko… fa kosa nieritreritra aho fa ho tsara kokoa izany satria ny vola dia mandeha amin'ireo mila azy indrindra.
Nilefa ihany aho tamin'ny farany. Be dia be ny olona namono ahy ka nariako ny tolotra (ary nanao ny fanomezana aho).
Tokony hijanona izany.
Vao haingana aho no niresaka tamin'ny CMO an'ny orinasa lehibe iray izay nilaza tamiko fa tiany ny manome fanampiana sy vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra ho valin'izy ireo manome atiny sy mampiroborobo ny entany sy ny serivisy omeny. Ny valin-kafatra dia mitovy amin'ity paikady ity… maro tamin'ny vahoaka no nikiakiaka hoe nanararaotra ireo mpianatra fotsiny ny orin'alika saka azy ary tokony hanome vola sy vatsim-pianarana izy ireo.
Iray ihany ny olana… tsy azony. Tsy misy teti-bola ho an'ny fanampiana sy vatsim-pianarana. Tsy afaka manome vola tsotra fotsiny izy izay takian'ny teti-bolany hampamoahana azy ary hampitombo ny vola azony. Tsy maintsy mampiasa vola izy ary mahazo tambiny amin'ny fampiasam-bola. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia manana tetibola ara-barotra izy ary afaka mampiasa azy amin'ny zavatra rehetra - raha toa ka miteraka valim-barotra izany. Tsy manao asa soa izy fa manao orinasa.
Orinasa maro no te-hanao azy roa
Fa kosa, manohy mandoa vola amin'ny karama isan-tsindry izy, dokam-barotra, atiny ary paikady hafa miaraka amin'ireo orinasa izay tsy hanala baraka azy imasom-bahoaka. Very tanteraka izany. Ireo mpitsikera izay mitondra ny orinasany toy ny biby goavambe (ary mitondra ny ankamaroan'ny orinasa toy ny biby goavambe) dia mamono antony. Avy eo ny vola dia mankany amin'ny orinasa lehibe hafa fa tsy manampy amin'ny toerana tena ilana azy.
Ny orinasa dia manao asa ahazoana tombony, saingy tsy midika izany fa tsy tokony hahita fotoana hanampiana ireo tsy dia mahantra, na ny tontolo iainana, na ireo sahirana. Ajanony ny famonoana olona noho ny varotra ary fantaro fa misy amina miliara dolara azo ampiasaina hanampiana ireo izay tena mila izany - saingy ny orinasa ihany no afaka mampiditra azy io raha mahatsapa izy ireo fa misy tambiny amin'izany fampiasam-bola izany.
Ajanony ny famonoana olona noho ny marketing.
Ireto misy ohatra tsara Mahatonga ny marketing
Clips mahafinaritra niasa niaraka AdoptAClassroom.org mahita mpampianatra mendrika ary gaga amin'izy ireo amin'ny efitrano fianarana nofinofisiny. Ity horonantsary ity, ampahany amin'ny Great Clips 'natambatra miteraka fampielezan-kevitra amin'ny marketing, - dia voalohany amin'ny tantaran'ny orinasa manambatra ny sosialy, dizitaly, fivarotana, ao an-trano, TV, radio ary pirinty.
Tags: mandray efitrano fianaranamiteraka marketingGrantsclip tsara-barotratanjonamarketing entin'ny tanjonatanjona-noroahinavatsim-pianarana
Apr 8, 2013 ao amin'ny 4: PM PM
“Ny tiako holazaina dia raha manana kodiarana fotsiny izahay. Mety ho zavatra izany.” - Westley, AKA ilay Dread Pirate Roberts.
Lazao amin'ireo sahirana fa hanampy ianao fa ny anao aloha dia tsy manampy. Tsy fiantrana izany. Tsy fanomezana izany. Tsy manome. Fanararaotana izany. Mahazo tombony izany. Varotra soavaly mahazatra izany.
Tsy tena fitiavana izany. Izany no mitranga isan'andro.
Manome ho an'ny antony. Raiso ny taratasin'ny fandoavana hetra. Soraty ny fanambaranao an-gazety. Miaraha miasa amin'ny ekipan'ny PR mba hahazoana antoka fa azonao ny teninao. Ataovy tsara izany.
Fa ny ankamaroany dia ataovy ho IZY, izay sahirana. Ataovy izany satria maniry mafy ny fonao. Aza manao izany ho an’ny fitiavan-tena. Raha mila ROI mivantana ianao amin'ny 'ezaka miteraka' ho an'ireo noana sy mijaly ary mitomany sy mitomany ary mihetsiketsika noho ny ratra, ny hanoanana ary ny tsy fahampian-drano, mitsambikina ao anaty tatatra feno aretim-pivalanana, voan'ny dysentery ary dobo tondraka amin'ny akanjo mitovy. mandritra ny 3 herinandro, mivavaka hanoherana ny fitsarany tsara kokoa mba hahavitany ny alina ao anatin'ny fandrobana sy ny rotaka ary ny fihinanan-kaniny, dia tsy zakanao izany.
Ireo Tale Jeneralin'ny orinasa lehibe dia efa natokana ho an'ny tetibolany. Ny "CMO an'ny orinasa lehibe" anao dia mandainga aminao na adala. Mila tehamaina sy latsa-bato izy. Na mila mandany alina miaraka amin'ireo niharam-boina izy. Hanova iray izany. Helo, nahafinaritra anay ny andro orana tao amin'ny LM tamin'ny fotoana toy izany. Nampiasa ny fitaovanay sy ny talentanay koa izahay mba hanokana fotoana rehefa avy niasa mba hanampiana ny fiaraha-monina. Opportunity Enterprises no tena tianay.
Manorata lahatsoratra. Manaova vavaka. Omeo fanoloana paosy. Fa aza manandrana maka ny ampahany amin'ny tsenan'ny tranonkala sy ny mpanjifa vitsivitsy amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny fijaliana sy ny fahorian'ny hafa.
Tsy piraty ianao. Tsy mpivarotra tsena mainty ianao. Ianao no maherifoko. Iray amin'ireo mpanoro hevitra ahy ianao. Eo amin'ny toerana mety ny fonao. Fantatro izany. Saingy anisan'ny ady lehibe indrindra nataoko nandritra ny andron'ny Denom U ireto: fanomezana ho an'ny tanjona vs. fankasitrahana noho ny fanomezana. Izany no mahatonga ny indostrian'ny CRM ho voafehy ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Tsy mila izany rehetra izany fotoana fohy, varotra soavaly sh*t ianao. Manana feo tsara indrindra amin'ny indostria ianao. Manana ny saiko ianao, ary mila zavatra betsaka izany. Matory aho mamaky ny ankamaroan'ny lahatenin'ny namanao. Mila manana herim-po fotsiny ianao mba ho mafy toy ireo 20 eo amin'ny ambaratonga eo amboninao dia hamindra tendrombohitra ianao. Ny zava-dehibe indrindra dia manana ny fanatrehana ny fanovana ianao. Ampiasao ny fanomezanao, fa tsy ny gimmicks. DM New Media dia ho tsara kokoa amin'ny fotoana maharitra.
Ary ho toerana tsara kokoa izao tontolo izao.
- Bromance ho an'ny fiainana
Apr 9, 2013 amin'ny 9: 10 AM
Ok, @natfinn:disqus – valinteny mampihomehy ity ary tena tsy mendrika hovaliako. Nanevateva ny namako akaiky koa ianao tamin'ny resaka. Ny fiheveranao momba ny fandraharahana dia tsy hoe tsy mahalala akory fa adala. Niasa tamin'ny orinasa maro aho ary nanana teti-bola an-tapitrisany dolara – ary tsy nanana teti-bola hanaovana fanomezana ho an'ny asa soa ny marketing, ary tsy nisy orinasa niasako nahazo “fiverenan'ny fanomezana” azon'izy ireo refesina. Saingy nanana vola ho an'ny marketing izahay. Ny tanjona eto dia ny fahafahana mampiasa io vola io amin'ny asa soa fa tsy orinasa hafa izay mety tsy ho toy ny asa soa. Ny fomba fijerinao no tena olana lazaiko – tsy mitombina izany. Aleo charity mahazo TSY MISY.
Apr 22, 2013 ao amin'ny 5: PM PM
Raha tsy mihaino an'ireo nanala baraka anao tamin'ny nanandrana azy ianao ary tsy nihaino ahy, dia andramo manome vola 500 dolara ho an'ireo niharam-boina tamin'ny Boston Marathon Bombers ary mividy Gumballhead isaky ny mampiasa ny teny hoe “kolikoly” izy ireo. Satria izay no antsoin'izy ireo hoe fanehoana sitrapo na fanohanana ho takalon'ny vola.
Ny fiantrana dia tsy mahazo NA inona na inona rehefa manandrana fomba toy izany ianao, ny ankamaroany dia tsy handray izany akory. Nahoana? Fantatr'izy ireo fa manokatra vavahadin'ny mpamatsy vola manantena tombontsoa ho takalon'ny vola izany. Mandany fotoana bebe kokoa izy ireo amin'ny fifampiraharahana amin'ireo mpamatsy vola noho ny antony ananany. Mampiasa azy ireo izany ary manamora ny lalana mankany amin'ny tombontsoa lalina kokoa sy maizina izay tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny kolikoly. Tehezan-tendrombohitra. Izany no mahatonga ny lalàna mandrara izany.
Salama, izaho Nat Finn. BA in Religion, BS in Business. Ireo mpanjifan'ny masoivoho mpanapitrisa nanananay tao amin'ny masoivoho ole - Sony, Samsung, Sealy, Trump University, TELEBrands - ireo mpamorona ny 'As Seen on TV', Russ Whitney (izay ny mpanjifany dia ahitana ny "Rich Dad, Poor Dad" an'i Robert Kiyosaki.) , All Star Products, (izay ahitana ny vokatra "Snuggie"), nahafantatra farafaharatsiny mba hanome ny vola azo avy amin'ny tombom-barotra ho an'ny antony. Nomanin’izy ireo izany. Mampalahelo, satria mety nahafantatra ny lafiny ara-toekarena amin'ny marketing. Fantatr'izy ireo ny fiantraikany ary fantatr'izy ireo ny fatran'ny fisehoan-javatra toy izany. Izay no niandrasako namaly. Malahelo aho fa tena nampalahelo ilay zava-nitranga.
Azafady, diniho indray ny hevitrao momba ny marketing marketing. Mahavariana loatra ianao. Mahita asa ho an'ny namana ianao. Manokatra ny tranonao ho an'ny olona sahirana ianao. Mitsitsy dimes ianao. Afaka manao zavatra betsaka kokoa ianao sy ny namanao CMO tsara. Mbola betsaka kokoa.
OK, hanandrana an'ity indray aho. Tsy manana teti-bola fiantrana izahay. Manana BUDGET MARKETING izahay. Na mahazo fiverenana amin'ny fampiasam-bola miaraka amin'ny BUDGET MARKETING izahay na miala amin'ny BISNES.
Noho izany, aleonao tsy mahazo na inona na inona ny fiantrana. Azoko. Ary tsia, tsy mamerina ny fijoroako aho. Aleoko mahita orinasa miasa sy mahazo tombony miaraka amin'ireo sahirana toy izay tsy misy.
Tahaka ny ataoko. Vao nahita olona marobe aho tamin'ity toe-javatra ity.
Ahoana ny momba ny PR kely miaraka amin'ny fanomezana?
Ary labiera iray.
Na vovoka Zombie. Andraso mandra-pahazoan'i Bill an'izany!
Apr 9, 2013 amin'ny 7: 30 AM
Tiako ny fomba fijery hafa eto momba ny fanangonam-bola ary izao no antony…
Ny sekolin'ny zanako dia manao fitsangatsanganana "Dining for Dough" isaky ny herinandro vitsivitsy. Tsotra ny hevitra, mandehana misakafo any amin'ny trano fisakafoanana toy izao ary io trano fisakafoanana io dia manome ny sekoly ny 10% amin'ny varotra rehetra amin'io takariva io. Raha ny fijerin'i Doug dia mitovy amin'ny dokam-barotra amin'ny trano fisakafoanana “avia hiara-misakafo aminay amin'ny alina toy izao ary homenay ny sekoly eo an-toerana ny 10% amin'ny varotray”. Amin'ny fiafaran'ny andro dia mahazo 10% ny sekoly na iza na iza manao ny fangatahana.
Ny mahasamihafa azy eto dia ny fomba fijerin'ny olona ny tolotra. Rehefa mangataka ny volantsika ny sekoly dia miteny isika hoe “tianay ny sekolinay ka andeha isika hanampy azy”. Rehefa mangataka izany ny orinasa iray dia miteny izahay hoe “miezaka mampitombo ny varotra fotsiny ity orinasa ity amin'ny fampiasana ny sekolin'ny zanako”. Na izany aza, ny vokatra farany dia mitovy.
Ekeko fa raha tsy namaky ity lahatsoratra ity aho ary nahatakatra ny fomba fijery hafa dia nitomany ratsy ihany koa aho. Mihemotra, inona no mahasamihafa ny mpianatry ny oniversite mampiasa kitapo na fitaovana hafa misy marika eo amboniny? Ny heveriko dia efa misy logo ny fitaovany ary tsy mahazo vola amin'izany izy ireo.
Apr 9, 2013 amin'ny 9: 04 AM
Tena hevitra tsara tokoa izany @google-607b0d9455bf19307cf8bf2968785187:disqus – tena marina ianao, mitovy ny fihetsika fa ny fomba fijery dia samy hafa be. Tsy ny 'hitrandraka' no tanjona, fa ny fampiasam-bola dolara ara-barotra izay ahafahany miverina amin'ny fampiasam-bola. Mahavariana ny fomba fijery ratsy momba ny fandraharahana nandritra ny taona maro. Zava-dehibe ny manana orinasa mampiasa vola amin'ny asa soa. Mahafinaritra ny fanomezana, saingy tsy misy fiverenana amin'ny fampiasam-bola matetika ny fanomezana. Noho izany… raha tsy hoe mpanankarena be loatra amin'ny vola mihoa-pampana aho dia mila mametraka ny vola any amin'izay hiverenany.